new year with crying heart
ရှမ်းအစားအစာများ အပိုင်း (2)
waiting to the end....
တွေ့ ရှိခြင်းနှင့် ပျောက်ဆုံးခြင်း...
ဒီနေ့ က 22 ရက်နေ့ လေ။ ရှမ်းနှစ်သက်ကူး 2104 ခုနှစ်မြောက်ပေါ့ဗျာ။ ဒီပွဲကို ဘန်ကောက်မှာ ကြီးကျယ်စွာကျင်းပ ပါတယ်။ ကျင်းပတဲ့ နေရာကတော့ ရှမ်းဘုန်းကြီးကျောင်း ၀တ်မိုင် (၀တ်=monastery၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ့။) (မိုင်ကတော့ = အသစ်) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။
ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်လဲဆိုရင် လူပြည့်ကျပ်နေအောင်ပါပဲ။ အဲခက်တာက ဒီနေ့ မှာ ကျနော်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ILO အတွက်သွားပြီး စကားပြန်လုပ်ပေးနေရတဲ့အတွက် ပွဲကိုသွားရောက်မလည်ခဲ့ရပါဘူး။
စကားမစပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်က မြန်မာစကားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ စကားလုံးတွေကို ပြောနေပေမယ့်လဲ၊ ကိုယ်ပြောတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို သိမသိတော့ ကိုယ်လဲမသိဘူးလေ။
ဂုဏ်ယူစရာ (ထင်တာပေါ့လေ) တစ်ခုကတော့ မြန်မာအလုပ်သမားလိုလိုက ထိုင်းစကားကို ပြောတတ်သားဗျ။ (မပီတာကလွဲရင်၊ ကျနော်လဲ မပီပါဘူးလေ)။ ကျနော်တို့ နဲ့ ပြောရင်တောင် သူတို့ က ထိုင်းလိုသုတ်တာ။
အဲလိုနဲ့အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်က ညနေ ၄ နာရီရှိနေပြီလေ။ ထိုင်းမှာဆိုရင် လိုင်းကားတွေက ည 12 နာရီ 59 ထိပဲပြေးတယ်လေ။ နှစ်သစ်ကူးကြိုတာက ည 12 နာရီလေ။ ကျနော်နေတဲ့ နေရာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းက အဝေးသားဗျ။ ဒါကြောင့်မို့မသွားလိုက်ရပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတွက် ရှမ်းဟင်းလေးတော့ချက်လိုက်ပါတယ်။
၁) ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီကို (သင့်လျော်တစ်လောက်) အခွံခွါပြီး ရေပြုတ်လိုက်ပါတယ်။
၂) 1၀ မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာ ပြုတ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်နီကို ရောထောင်းပါတယ်။
ထောင်းနေစဉ်အတွင်းမှာ ပဲပုတ်အမှုန့် နှင့် ငရုတ်သီးအမှုန့် ကို နှစ်သက်သလို ရောထည့်လိုက်ပါတယ်။ ကြေသွားတဲ့အချိန်မှာ ဆား၊ ဟင်းချိုမှုန့်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ပဲပုတ်ထောင်းကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ပဲပုတ်မရှိရင် တခြားဖြစ်တဲ့ ငါးပိကို အစားထိုးလို့ ရပါတယ်။ ) အဲရှမ်းဟင်းတော့ မဖြစ်သွားဘူးပေါ့လေ)
ဒါနဲ့ ပဲ ဒီနှစ်မှာတော့ ကိုယ့်ဟင်းနဲ့ ကို ကျေနပ်လိုက်ရပါတယ်။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:45 AM No comments:
One the new year night
There are one candle
I sat on the side of it
opposite are empty.
The dishes are full of foods
no one would cerebrate with me.
In the darkness with the light of candle
the loneliness of mine.
The happiness that I want to joy
The life of loneliness
I will bare in mind
no cry will be
I will cheer with my crying heart.
Posted by Shankalay or Sai Sai at 12:37 PM No comments:
ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာ သူ့ ကိုတွေ့ ခဲ့။
အပြုံးလေးနဲ့ငါ့ကိုကြိုဆို
ပြုံးချိုစွာနဲ့ငါ့ကိုလှိုက်လျော။
သွားခဲ့မိတယ် နေရာနှံ့ ရယ်
ရယ်မောခဲ့ပေါ့ တို့ နှစ်ယောက်ကွယ်။
မင်းရှက်ရမ်းကာ မျက်လွာချလို့ 
ဒီနေ့ မှတွေ့ တာ မယုံနိုင်ပါ။
ဖူးစာဆုံရာ ငါတို့ တွေ့ တာ
ုငြင်းဆန်နေလဲ ငါတို့ ဖြစ်မှာပဲ။
ငါတို့ ဖြစ်တော့ ရေစက်ကုန်ကာ
ခွဲခွါချိန်မှာ ပြုံးချိုစွာနဲ့ ။
ကြံကြိုက်ခွဲခွာ လူ့ ဘ၀ပါ
မလွမ်းပါနဲ့အသစ်ရှာပါ
(နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ ကောင်းတာလေးတွေရေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေပဲထွက်လာတော့ မတတ်နိုင်ဘူးလေ)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 12:03 PM No comments:
ပျော်ရွင်စွာနဲ့အတွဲများလျှောက်ကာ
ရယ်ကာ ပြုံးကာဖြင့် စကားပြောကြတာ။
ဤမြင်ကွင်းဟာ သက်ဆုံးတိုင် မှတ်မိမှာ။
သီချင်းများဆို ကိုယ်လှုပ်ရှားလို့ 
ပွဲတန်းလေးမှာ လိုက်ကာပြောလို့ 
တောင့်တမိတယ် သူတို့ လို ကွယ်။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 11:19 AM No comments:
Posted by Shankalay or Sai Sai at 7:37 AM No comments:
I am strong, no wrong can be
I am brave, one can't brake me
I drink beer, no dear near me
I am heart break, nobody date me.
crying in bathroom, alone by myself
without nice and smile, I will be die.
shed the tear and smile
no emotion will be mine.
the usual self, I left in past
haunting the tear I left in past.
how hurt will be
I will just cry
waiting the day, my tear will dry.
Posted by Shankalay or Sai Sai at 11:02 AM No comments:
ယနေ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဓါတ်စာဖျော်ရည်တစ်မျိုး ခေတ်စားနေပါသည်။ လူအများ စိတ်ဝင်စားလာအောင် စတင်ဖော်ထုတ် ဆော်သြ ခဲ့သူကတော့ ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးအရှင် တိုမီဇာဝ ဖြစ်ပါတယ်။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတဲ့ ဓါတ်စာဖျော်ရည်ကတော့ ``အာလူးစိမ်း`` ဖျော်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော်က "ဒီနှစ်ထဲမှာ ကင်ဆာအများအပြားဟာ အာလူးစိမ်း ဓါတ်စာကို မှီဝဲခဲ့ကြပြီး ပမာဏ တော်တော်များများဟာ
သိသိသာသာ သက်သာသွားပြီး သေမင်းနှုတ်ခမ်းဝက ပြန်လာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်"။
အသုံးပြုပုံကတော့ အာလူးအစိမ်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ထုထောင်းပါမယ် ။ ပြီးမှ ပိတ်စိမ်းပါးနဲ့ထုပ်ပြီး အရည်ရအောင်ညှစ်ယူပါမယ် ။ အဲဒီအရည် ဖန်ခွက် တစ်ခွက်မှ နှစ်ခွက် နေ့စဉ်မှီဝဲသွားမယ်ဆိုရင် အသည်းရောဂါ ၊ ဆီးချိုရောဂါ ၊ အစာအိမ်ရောဂါ ၊ကျောက်ကပ်ရောဂါ ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ ခါးနာ ၊ ပုခုံးနာ ၊ ကျီးပေါင်းနာရောဂါတွေ ပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပျောက်ကင်းကြောင်း အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က ထောက်ခံစာများရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
မစ္စတာတီ ဆိုသူသည် နားရွက်အောက်နားမှာ အဖုတစ်ဖု ပေါ်လာတာနဲ့ ဆေးရုံကိုသွားပြီး ကင်ဆာကျိတ် ဖြစ်နေပြီး ခွဲစိတ်ကုသပြီး ဓါတ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လဲ ကင်ဆာကလပ်စည်းတွေက အဆုတ်ထိအောင် ပျံနှံသွားပါတယ် ။ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများက ကင်ဆာကလပ်စည်းတွေ ပျံနှံ့ကုန်လို့ ကုသလို့ မရနိုင်တော့ ဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။
အဲဒီနောက် သူဟာ အာလူးစိမ်းဓါတ်စာ အကြောင်းကြား သိရတဲ့အတွက် အရှုံးမရှိဘူးဆိုပြီး သောက်ကြည့်တယ် ။ အညွှန်းအတိုင်း နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ သောက်ခဲ့ပါတယ် ။ အခုဆိုရင် ကင်ဆာကလပ်စည်းတွေ လျှော့ကျသွားပြီး ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ခွန်အား ပြန်ကောင်းလာပါတယ် ။ မူလ အလုပ်အကိုင်လည်းပြန်ပြီးလုပ်ကိုင်နိုင်ပါပြီ ။
သုတေသီ တိုမီဇသ-က သူ့ရဲ့ ``ကင်ဆာရောဂါ ကြောက်စရာမလို၊ ကျန်းမာစေကြောင်း နည်းလမ်းကောင်း ``(The way to healthy life ; Cancer not to be feared) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ကင်ဆာရောဂါ ခွဲစိတ်ကုသခဲ့သည့်တိုင်အောင် လူနာရဲ့အကြောက်တရားကြောင့် ကင်ဆာကလပ်စည်းတွေ ပျံနှံ့ ကုန်ရပါတယ်။
အကျိူးဆက်အနေနဲ့ လူနာဟာ ခံတွင်းပျက်ခြင်း ၊ အားအင်ချည့်နဲ့လာခြင်းတို့ဖြစ်လာရပါတယ် ။ အာလူးစိမ်း ဓါတ်စာကို သောက်ခြင်းအားဖြင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးတွေ မခံစားရပဲ လူနာဟာ တစ်နေ့တစ်ခြား အားအင်ပြည့်ဖြိုးလာတာတွေ့ရပါတယ် ။ အာလူးပင်ဟာ ပင်ကိုယ်က အာဟာရပြည့်ဝနေတဲ့ အစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် အကျိူးမယုတ်ပါဘူး ။ သူ့ကို မှန်မှန်မှီဝဲခြင်းအားဖြင့် ကင်ဆာ ကလပ်စည်းတွေကို ဟန့်ထားစေပါတယ် ။``လို့ဖော်ပြထာားပါတယ် ။
အာလူးစိမ်း ဓါတ်စာဟာ ကိုယ်တိုင် လွယ်လွယ်ကူကူ ဖော်စပ်နိုင်ပြီး ချက်ချင်းလက်ငင်း သောက်သုံးနိုင်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ အဲဒီအချိန်တိုအတွင်းမှာ သူ့ရဲ့ အာနိသင်ကို တွေ့ထိခံစားနိုင်ပါတယ် ။ `` ဓါတ်စာ တစ်ပါတ် နှစ်ပါတ်လောက် သောက်ပြီးတာနဲ့
နာကျင် ကိုက်ခဲမှုဝေဒနာတွေ တစ်စတစ်စ လျှော့ပါးသွားပါတယ် ။ ခံတွင်းပြန်ပြီးကောင်းလာမယ် ။ အသားအရေ
အာလူးမှာ အာဟာရဓါတ်တွေ စုံစုံလင်လင်ပါရှိပြီး အထူးသဖြင့် ဗိုက်တာမင်စီဓါတ်နဲ့ ထုံးဓါတ်တို့ အများဆုံးပါဝင် ပါတယ် ။ ရှေးဟောင်း ဂျာမန်ဆေးကျမ်းတွေမှာ အာလူးစိမ်းဓါတ်စာရည်ကို အစာအိမ် အနာပေါက်ခြင်း ၊ ၀မ်းချုပ်ခြင်းတွေ အတွက်ပေးရကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ် ။
ကင်ဆာကလပ်စည်းတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် ပါတ်သက်ပြီး အာကိတ တက္ကသိုလ်ဆေးသုတေသန ဌာနက ပါမောက္ခ ကာဂါမိ-က ပြောကြားရာမှာ `` ကင်ဆာကလပ်စည်းကိုထိန်းချုပ်စေတဲ့ ဓါတ်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီဆေးနဲ့ ကြွက်ကလေးတွေ အပေါ်မှာ စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါ အလားအလာကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ် ။ သူဟာ သူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကို စာတမ်းပြုစုပြီး မနှစ်က ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကင်ဆာညီလာခံ (International Cancer Society Conference ) မှာ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ အာလူးစိမ်းဓါတ်စာ ဖျော်ရည်လုပ်နည်းဟာ အလွန်ပဲလွယ်ကူပါတယ် ။ အရွယ်တူ အာလူး (၃)လုံးကိုယူပြီး ရေစင်အောင်ဆေးပါ ၊ အခွံမနွှာရပါ ။ အစို့ပေါက်လေးများရှိရင် ဖယ်ရှားပေးပါ ။ ပြီးလျှင် အာလူးကို သခွားခြစ်ဖြင့် အစလေးများဖြစ်အောင် ခြစ်ပေးပါ ။
ပြီးက အဲဒီအစလေးများကို သန့်ရှင်းသော ပိတ်စိမ်းပါးစဖြင့် ထုပ်ပြီး (အုန်းနို့ညှစ်သကဲ့သို့) အရည်ညှစ်ယူပါ ၊ အဲဒီအရည်ကိုခွက်ထဲမှာ ထည့်ပြီး အရသာကောင်းအောင် ပျားရည်နဲနဲရောစပ်ပြီး သောက်ပါ ။ အဲဒီအာလူးအရည်ကို နံနက်တိုင်း တစ်ခွက်နှုန်းဖြင့် သောက်ပေး နိုင်ပါတယ် ။
ယနေ့ကာလခေတ်တွင် ကင်ဆာရောဂါသည် အလွန်အဖြစ်များ၍ ငွေကုန်ကြေးကျ များသောရောဂါဖြစ်ပါသည်။ ကင်ဆာရောဂါ ပျောက်ကင်းစေနိုင်သော တိုင်းရင်းဆေး ၊ နိုင်ငံခြားဖြစ်ဆေး အမြောက်အများ ပေါ်ထွက် လျှက်ရှိပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုရ ခန္ဓာရှိ၍ ဝေဒနာရှိဖြင်းဖြစ်ပါသည် ။ မိမိပြုသော ကုသိုလ် ၊ အကုသိုလ် အစုစုတို့သည် သံသရာ ပြန်၍ တစ်ဖန် လည်ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ထို့ကြောင့် စိတ်ဓါတ်မကျဘဲ ၊ အားမငယ်ဘဲ မိမိတို့၏ ရောဂါဝေဒနာများကို စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်စွာ ၊ နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ကုသရမည်ဖြစ်ပါသည် ။
မိမိ၏ ကုသိုလ်ကံတရားအကျိုးပေးသော် မိမိနှင့်ကိုက်ညီသော ဆေးဝါးများ ၊ဆရာသမားများ (အနာနှင့်ဆေးတည့်သော်) တွေ့ ကာ ရောဂါအမြစ်ပြတ်ကာ (လုံးဝ)အရှင်း ပျောက်ကင်းချမ်းသာနိုင်ပါသည် ။
သို့ဖြစ်ရာ အထက်တွက်ဖော်ပြခဲ့သော အာလူးစိမ်းဖျော်ရည်သည် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသည့် အပြင် ပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ လူသားတို့ စားသုံးသော သဘာဝ ဓါတ်စာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ရောဂါဝေဒနာရှင်များလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ရန် အကျိူးငှာ ဤ ဆေးနည်းအား တဆင့်ပြန်လည်ဝေငှပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရှမ်းကလေး (အီးမေးလ် မှသူငယ်ချင်းပို့ ထားသည်ကို ပြန်၍ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 7:39 AM No comments:
၉) ဘဘ၀၀ စိတ်ဓါတ်ကျ
၁၀) "ရွာနံဘေးက ချောင်းကလေး
မည်သူမျှ မဆယ်ကြ။" ….ဟင့်…ဟီး..အီး
၁၁) အလောင်းလေးများ ဖွေးလို့စီ
(သူငယ်ချင်းလုပ်ထားတဲ့ http://tailengtai.blogspot.com/ မှ ကူးယူထားပါသည်။ )
Posted by Shankalay or Sai Sai at 7:21 AM No comments:
တွေ့ ချိန်လေးမှာ မယုံကြည်တော့
အပြစ်ပိုက်လို့မျက်ရည်များသာ
၀မ်းနည်းလို့ ကွာ ငိုခဲ့မိတယ်။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 11:04 AM No comments:
လူ့ ဘ၀က ဟာတာတာပါ
အလုပ်လုပ်လို့ဝင်ငွေလေးရှာ
တစ်ကောင်ကြွက်မို့အထီးကျန်တာ
တူတာတွေ့ တော့ မသိခင်မှာ
မျက်စိရှေ့ မှာ ပျောက်ကွယ်သွားလား။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 11:01 AM No comments:
ချစ်သူခွဲလို့ဘ၀ကိုရှာ
အားလုံးမေ့လို့မင်းရင်ခွင်မှာ
ခိုလုံစရာ ရင်ခွင်ဝေးလို့ 
မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့စောင့်မျှော်နေမယ်။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 10:52 AM No comments:
ယောက်ျားလေးတွေဟာ သူတို့သဘာဝအတိုင်း တနေ့လုံးနီးပါး စတတ် နောက် တတ်ကြပေမယ့် အိပ်ခါနီးလေးမှာတော့ သူတို့ ဂရုစိုက်တဲ့ (သူတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ )မိန်းကလေးကိုအကြောင်းကိုတော့ တွေးကြစမြဲပါဘဲ ……
သူတို့မှာရှိနေတဲ့ ပြသနာကိုပြောပြနေခြင်းဟာ နားထောင်ပေးစေချင်တဲ့ သဘောပါပဲ.. အကြံတောင်းနေတာ မဟုတ်ကြဘူး.. တိတ်တိတ်လေးနဲ့နားထောင်ပေးနေလိုက်ပါ.. :P
ယောင်္ကျားလေးက မိန်းကလေးကို ချစ်နေပြီဆိုတဲ့ သက်သေပြတဲ့ အချိန်ဟာ အဲဒီကောင်မလေးကို ပုံမှန်စနောက်ခြင်းပါပဲ။
8) Guys use words like hot or cute to describe girls. They rarely use beautiful or gorgeous. Ifaguy uses that, he loves you or likes youawhole heck ofalot.
သူတို့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကြောင့်ရူးနေရပြီဆိုရင် သူတို့အမှန်တကယ်ပြောနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်.. ပြောခဲတဲ့စကားလေးပါ..
တစ်ယောက်တည်းနေခွင့်ပေးပါ ဆိုတာ ညာတာပါ.. ဆိုလိုရင်းကတော့ ငါပြောတာကိုလာပြီးနားထောင်ပေးပါလို့ ပြောနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်..(ကျနော့်အတွက်တော့ တကယ်ကို ဆိုလိုတာလေ...အင်းလူခြင်းမှ မတူတာပဲလေ)
သူတို့စကားကိုသေသေချာချာ ကျကျနန ပြောနေရင် ဂရုစိုက်ပေးပါ နားထောင်ပေးပါ..အဲလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်အခြေအနေ ကိုနားလည် သဘောပေါက်သွားမှာပါ။ ယောင်္ကျားလေးတွေက အဲလိုပြောခဲပါတယ်။
တစ်စက္ကန့် ထက် ပိုပြီးကောင်မလေးအား ကြည့်နေခဲ့ရင် သူတစ်ခုခုကိုသေချာ တွေးနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်..
ခန့်မှန်းရခက်တဲ့မိန်းကလေးတွေ ထူးခြားတဲ့မိန်းကလေးတွေ ရူးတူးတူးပေါချာချာ ကောင်မလေးတွေ :) အကြောင်းကိုပိုတွေးတတ်ကြပြီး သူတို့အာရုံမှာ ထိုမိန်းကလေးများက မသိဘာသာ ပိုနေရာယူနေတတ်ကြပါတယ်..
17) Whenaguy sacrifices his sleep and health just to talk to you, He really likes you and wants to be with you as much as possible……..
ကောင်မလေးနဲ့စကားပြောခွင့်ရဖို့အတွက် သူရဲ့အိပ်စက်ခြင်း နဲ့ သူရဲ့ကျမ်းမာရေးကို ပြောပြနေခြင်းဟာ သူကောင်မလေးကို တကယ်ကြိုက်လို့ အတူရှိနေချင်တဲ့အတွက်သာပြောနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်..
ကောင်မလေးလမ်းခွဲသွားတာ လတော်တော်ကြာနေပေမယ့် ဆုတောင်းတစ်ခုရရှိမယ်ဆိုရင် အဲတာဟာကောင်မလေးသူဘ၀အတွင်း ပြန်လာနိုင်ဖို့အတွက်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
Posted by Shankalay or Sai Sai at 2:41 AM No comments:
တစ်ခါက လင်မယား နှစ်ယောက်သည် ငါးမျှားလို့ရသော အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုကို အားလပ်ရက်ခရီးထွက်ခဲ့ကြသည်။ ယောင်္ကျားက ငါးမျှားလျှင် ခဏတဖြုတ် ပဲမျှားချင်၏် ။ မိန်းမကတော့ စာဖတ်ဝါသနာ ပါလေသည်။
တစ်ရက်သောမနက်ခင်းမှာ အချိန် အကြာကြီး ငါးမျှားရာမှ ပြန်လာသော ယောင်္ကျားက တရေးတမောအိပ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။
မိန်းမ ကတော့ စာဖတ်မည်ဟု စိတ်ကူး၍ ရေကန်ထဲတွင် လှေထုတ်လှော်သည်။ ဟိုနားဒီနား လှေလှော် ကြည့်ရင်း ပျင်းလာသောအခါ စာအုပ်ထုတ် ၍ စာဖတ်နေလိုက်သည် ။
ထိုအခါ တာဝန်ရှိသူအရာရှိတစ်ယောက် မော်တော်ဘုတ်ဖြင့် ရောက်လာသည် ။လှေအနား ကပ်လာကာ ဒီလိုစမေးလေသည် ။
မိန်းကလေးက “စာအုပ် ဖတ်နေ ပါတယ်” ဟုပြန်ဖြေရင်း ဒီလူ မျက်စိကန်းနေတာလားဟု တွေးလိုက်သည်။
“ရှင်က ငါးမျှားတံတွေနဲ့ ငါးမျှားတဲ့ ပစ္စည်းကရိယာ အစုံအလင်ပါနေလို့ ကျမကို ဒါဏ်ငွေရိုက်မယ်ဆိုရင် ရှင့်ကိုလဲ မုဒိမ်းမှု နဲ့တရားပြန်စွဲ ရလိမ့်မယ်” ဟုမိန်းကလေးက ပက်ခနဲ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။
”မှန်ပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ရှင့်မှာလည်း ပစ္စည်းကရိယာ အစုံအလင်ပါနေတာပဲမဟုတ်လား”
Posted by Shankalay or Sai Sai at 2:37 AM No comments:
ပန်းခြံထဲမှာ ခုံတန်းလေးပေါ်မှာ ချစ်သူ စုံတွဲ တီတီတာတာ တွက်ထိုးနေသတဲ့။ အဲဒီ စုံတွဲနဲ့ ဘေးကပ်ရပ် ခုံတန်းမှာ အဖိုးကြီးတစ်ယောက်
စာဖတ်နေရင်း ချစ်သူစုံတွဲ တွက်ထိုးသမျှကိုကြားရတယ်ပေါ့။
ကောင်မလေးကပြောတယ်၊ မောင်ရယ်တဲ့ ချစ်ချစ် ခေါင်းမှုသလိုလိုပဲတဲ့။ ဒါနဲ့ ကောင်လေးက နဖူးလေကို ကြင်ကြင်နာ နမ်းရှိုက်ပေးပြီး ခေါင်းမှုးတာသက်သာလားတဲ့ ကောင်မလေကိုမေးတယ်။ သက်သာသွားတယ် မောင်မောင်ရယ်တဲ့။
ကောင်မလေးက ဆက်ပြောတယ်၊ မောင်ရယ်..ချစ်ချစ် ဇက်ကြောတွေတက်လာပြန်ပြီတဲ့။ ဒါနဲ့ ကောင်လေးက ကောင်မလေးရဲ လည်တိုင်ကို မွေးမွေးပေးလိုက်ပြီး သက်သာသွားသလားမေရယ်တဲ့။ အခုမှကောင်းသွားတယ်မောင်ရယ်တဲ့။
ခဏကြာတော့ ကောင်မလေးက ပြောပြန်ရော.. မောင်ရယ်..မေ့ လက်မောင်းတွေ တဆစ်ဆစ်နာကျင်တယ်တဲ့.. ကောင်လေးက ဒါဆို မေရယ် မောင် မေ့ရဲ့ လက်မောင်လေးကို နမ်းပေးမယ်တဲ့….
ချစ်သူစုံတွဲ တွက်ထိုးသမျှကို ကြားရတဲ့ အဖိုးကြီးက ကြာတော့ နားကြားပျင်းကပ်ကပ်ရှိတာနဲ့ ထပြီး ပြောသတဲ့.. ဟေ့ဟေ့ ငါတူ ငါ့လည်းကူညီပေးပါဦး.. ဦးဦးဖင်မှာ လိပ်ခေါင်းပေါက်နေလို့ တဲ့……………
Posted by Shankalay or Sai Sai at 2:35 AM No comments:
တစ်ခါကတရားရုံးကိုအမှု တစ်ခုရောက်လာသတဲ့ ။အမှုကတော့စပါယ်ယာကခရီးသည် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ကို ကားပေါ်မှကန်ချတဲ့ အမှုဖြစ်တယ်။
" မောင်မင်း တရားလိုကပြောနေတယ် မင်းကကားမောင်းနေတုန်းသူ့ ကိုတွန်းချတယ်ဆို ဟုတ်သလား?"
" ဘာလို့တွန်းချတာလဲ?"
" ကျွန်တော့်ဖြစ်ပုံကိုအစအဆုံးရှင်းပြပါရစေ။ ဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာ လက်ပွေ့ အိတ်ကြီးတစ်လုံးကိုင်ပြီးတော့
ကားပေါ်တက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်ကားလက်မှတ်ဖြတ်ဖို့ သူ့ နားသွားတော့လက်ပွေ့ အိတ်ကြီးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
အထဲကလက်ကိုင်အိတ်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။လက်ပွေ့ အိတ်ကိုပိတ်ပါတယ်။ လက်ကိုင်အိတ်ကိုဖွင့်ပါတယ်။ အထဲက ကတ္တီပါအိတ်ကိုထုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့လက်ကိုင်အိတ်ကပိတ်ပါတယ်။
လက်ပွေ့ အိတ်ကိုဖွင့်ပါတယ်။ လက်ကိုင်အိတ်ကိုထည့်ပါတယ်။လက်ပွေ့ အိတ်ကပိတ်ပါတယ်။ ကတ္တီပါအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်နေတုန်းအရှေ့ခုံကခရီးသည်ကကားခပေးလို့ သွားယူရပါတယ်။ ကျွန်တော်သွားနေတုန်းမှာ သူကကတ္တီပါအိတ်ကိုပိတ်ပါတယ်။လက်ပွေ့ အိတ်ကြီးကိုဖွင့်ပါတယ်။
လက်ကိုင်အိတ်ကိုထုတ်ပါတယ်။လက်ပွေ့ အိတ်ကိုပိတ်ပါတယ်။ လက်ကိုင်အိတ်ကိုဖွင့်ပါတယ်။ ကတ္တီပါအိတ်ကိုထည့်ပါတယ်။ လက်ကိုင်အိတ်ကိုပိတ်ပါတယ်။လက်ပွေ့ အိတ်ကြီးကိုဖွင့်ပါတယ်။ လက်ကိုင်အိတ်ကိုထည့်ပါတယ်။လက်ပွေ့အိတ်ကြီးကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သူ့့နားကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်ကထုတ်ပြီးပြီထင်လို့ တောင်းတော့သူက မင်းမယူသေး
လက်ပွေ့ အိတ်ကြီးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ် အထဲကလက်ကိုင်အိတ်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ လက်ပွေ့ အိတ်ကိုပိတ်ပါတယ်။
လက်ကိုင်အိတ်ကိုဖွင့်ပါတယ်။ အထဲကကတ္တီပါအိတ်ကိုထုတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့လက်ကိုင်အိတ်ကိုပိတ်ပါတယ်။လက်ပွေ့ အိတ်ကို ဖွင့်ပါတယ်။လက်ကိုင်အိတ်ကိုထည့်ပါတယ်။
လက်ပွေ့ အိတ်ကပိတ်ပါတယ်။ ကတ္တီပါအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာပဲ နောက်ထပ်ခရီးသည်တစ်ယောက်တက်လာပြီး ပိုက်ဆံလှမ်းပေးလို့ သွားယူပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာသူကစောစောကလိုပဲကတ္တီပါအိတ်ကိုပိတ်ပါတယ်။
လက်ပွေ့ အိတ်ကြီးကိုဖွင့်ပါတယ် ။လက်ကိုင်အိတ်ကိုထုတ်ပါတယ်။ လက်ပွေ့ အိတ်ကိုပိတ်ပါတယ်။ လက်ကိုင်အိတ် ကိုဖွင့်ပါတယ်။ ကတ္တီပါအိတ်ကိုထည့်ပါတယ် လက်ကိုင်အိတ်ကိုပိတ်ပါတယ်။ လက်ပွေ့ အိတ်ကြီးကိုဖွင့်ပါတယ်။
လက်ကိုင်အိတ်ကိုထည့်ပါတယ်။လက်ပွေ့ အိတ်ကြီးကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတော့မင်းမယူသေးဘူး
မှတ်လို့ ဆိုပြီးတော့လက်ပွေ့ အိတ်ကြိးကိုဖွင့်ပါတယ်"
"တော် တော် တော်လောက်ပြီ"
"မင်းမို့ လေးခါထိသည်းခံနေတာ ငါသာဆိုနှစ်ခါလောက်ကတည်းကကန်ချတယ်"
Posted by Shankalay or Sai Sai at 5:17 AM No comments:
အောက်ကပုံလေးတွေက သီတင်းကျွတ်ရင် ကျနော်တို့ လုပ်တဲ့ ပုံလေးတွေပါ။
သီတင်းကျွတ်ပြီး ဘုန်းကျောင်းတက်တဲ့နေ့ ဆိုရင် စောစောလေးထရပါတယ်။ မျက်နှာလေးသစ်၊ အ၀တ်ကောင်း (သန့် ရှင်းတဲ့အတ၀တ်) ကိုဝတ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို6နာရီမတိုင်မှီက သွားတယ်လေ။ ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အပေါ်ကအတိုင်း စေတီမှာ ဖုရောင်းတိုင်ထွန်း၊ ဆွမ်းတွေကပ်ပြီး ဆုတောင်းပါတယ်။
စေတီကိုမှာ ပူဇော်ပြီးရင်တော့ နတ်စင်မှာ ကိုသွားပါတယ်။ (အိမ်စောင့်နတ်တို့ ၊ ရွာစောင့်နတ်တို့ ကို ကျနော်တို့ က ယုံတယ်လေ။ တစ်ခြား မှာတော့မသိဘူးပေါ့။ ) ပြီေးတာ့ ပူဇော်ဆုတောင်းတယ်လေ။
အဲဒါတွေလုပ်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သီလ လာယူတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ကျနော်တို့ ကလိုက် ကန်တော့ပါတယ်။ အပြစ်တွေရှိရင် ခွင့်လွတ်ဖို့ နဲ့ကို့ ပေါ်သွန်သင် ဆုံးမဖူးတဲ့ ကျေးဇူးတွေအတွက် ကန်တော့တာပါ။
ညရောက်တော့၊ ပုံလေးမှာတွေ့ ရတဲ့အတိုင်း ထင်းရှူးပင်ကိုမီးထွန်းညှိပါတယ်။ (ထင်းရှူး နဲ့ထင်းတွေကို ပေါင်းပြီးအပင်လို ပုံစံလုပ်ထားတာပါ။ ကျနော်တို့ ရွာမှာဆိုရင် နှစ်ပင်လောက်လုပ်တယ်လေ။) မီးထွန်းညှိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ တော်တော်လေးကို လင်းထိန်သွားတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့အိုးစည် တွေကို တီးကြပါတယ်။ တော်တော်လေးကို စည်ကားတယ်လေ။ ရွာတိုင်း ရွာတိုင်းလဲလုပ်ပါတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဒကင်းကင်ကနေ ဆင်းသက်လာတာကို ကြိုဆိုတာလေ။
အဲလိုလုပ်ပြီးချိန်မှာ ကျနော်တို့ က ကားတွေနဲ့တခြားရွာက စေတီတွေမှာ မီးလိုက်ထွန်းပါတယ်။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ ခေါ်တာက ဖုရောင်းတိုင် တစ်ထောင် (1000) ထွန်းခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ ဆိုရင် မြို့ တွင်း၊ မြို့ ပြင် ထိန်ထိန်ညီးနေအောင် ကို စည်ကားပါတယ်။
ဖရောင်းတိုင်ထွန်းပြီးပြန်လာရင်တော့ မီးပုန်းပျံလေးတွေလွတ်လေ။ အဲဒီနေ့ ဆိုရင် ကလေး၊ လူကြီး၊ အပျို၊ အအို မရွေး ဘုန်းကြီးကျောင်း မှာ ရောက်နေကြတာဗျ။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:02 AM No comments:
Posted by Shankalay or Sai Sai at 8:29 AM No comments:
လူတိုင်းမှာတော့ ပါးစပ်နံ့ လေးတွေ ရှိကြမယ်။ ဒါကြောင့် အပျို ဘ၀လေးမှာ စားပြီးတိုင်း သွားတိုက်ရတာလဲ အမောလေ။ တချို့ဆိုရင် တစ်နေ့ ကို6ခေါက်လောက်တောင် တိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လို တိုက်တိုက် အနံ့ က ပျောက်မသွားတာလေးကို ခံစားရပြီး ကသိကအောက် ဖြစ်မိတဲ့ အချိန်လဲ ရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ အထူးသဖြင့် ရည်းစားလေးနဲ့နမ်းမယ်လုပ်တုန်း xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx တာတွေလဲ ရှိမှာပေါ့ နော်။ ( ကိုယ့် ကိုကိုယ် စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော် (မြန်မာပြည်ကလာတယ်ဆိုတော့ censor ဖြတ်တတ်တဲ့ အကျင့်က စွဲနေတယ်လေ))။
ဒါပေမယ့် အခုတော့ ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။
လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါ။ ကိုယ့် ပါးစပ်အနံ့ ပျောက် ချင်ရင်တော့ ကန်စွန်းရွက် (ရိုးတန်အနီ) ကို မန်ကျဉ်းသီးနဲ့အချဉ် ဟင်းရည်ချက်ပြီးသောက်ပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ (ပျောက်ချင်လွန်းလို့အရမ်းမလုပ်နဲ့ နော်၊ ချီးပန်းရင် တော့ တာဝန် မယူဘူးဗျို့ )
ဒါမှ မဟုတ်ရင် အစာစားပြီးတိုင်း မန်ကျဉ်းသီး အချဉ် (၀ါ) အချိုကို စားပေးရင်လဲ အနံ့ ပျောက်စေနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ရှမ်းကလေး (source: swan နှင့် ဖြည့်ဆည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 10:15 AM No comments:
အခုခေတ်မှာဗျာ အသက်ရှင်ဖို့စားရတယ်ဆိုတာထက် စားဖို့ အသက်ရှင်နေရတဲ့ ခေတ်ရောက်နေတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ လူက မနက်အစောကြီးထ ပြီးတော့ ၀င်ငွေရဖို့ အရေး အလုပ်တွေကြိုးစားပြီးလုပ်ရတယ်လေ။ ရလာတဲ့ ၀င်ငွေကိုလဲ လောက်င အောင် သုံးနေရတယ်လေ။ ၀င်ငွေမရှိရင် အိမ်က ဆူဆူပူပူ လုပ်တာတို့ ကလဲ မမြင်ချင်အဆုံးပေါ့ဗျာ။ ခုခေတ်က လူတွေက စားစရာရှိရင် တိတ်တိတ်လေးနေပြီး စားစရာမရှိရင် ဆူညံ၊ ဆူညံ လုပ်နေကြလို့စားဖို့ အသက်ရှင်တဲ့ ခေတ်လို့ကျနော်တော့ ကောက်ချက် ချတယ်လေ။
ကဲ... အစားအစာ စားတဲ့အခါမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျေညှက်အောင် ၀ါးစားရပါမယ်။ အဲဒါမှ ကိုယ့်ဝမ်းဗိုက်က သိပ်ပြီး အလုပ်လုပ် ရမှာလေ။ ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတာပေါ့။
ဒုတိယ အချက်က ထမင်းစားတဲ့အချိန်နဲ့အိပ်ချိန်က3နာရီ ကွာရမယ်နော်။ မဟုတ်ရင် လူကို ၀စေတယ်ဗျ။ (မယုံမရှိပါနဲ့ကျနော်လဲ စားပြီးရင် အိပ်တတ်တဲ့ အကျင့်လေးရှိနေတာ အခုဆိုရင် ဆင်ပေါက်စလေးတောင်ဖြစ်နေပြီလေ။ အရင်တုန်းကတော့ model လိုလို၊ ၀ါးခြမ်းပြား အ၀တ်စီးထားသလိုလို ပေါ့ နော်။)
တစ်ခါ တလေတော့လဲ ငယ်ငယ်ကသင်ထားတဲ့ သင်ခန်းစာလေးကို ပြန်မှတ်မိပါတယ်။ ဘာတဲ့........
Posted by Shankalay or Sai Sai at 10:02 AM No comments:
လူတွေက အသက်ကြီးလေ ပိုပြီးလှချင်လေတဲ့ဗျ (ကျနော့်အမြင်လေ)၊ ဥပမာအားဖြင့် တစ်ချို့ အပျို ကြီးတွေက ပြောရင်တော့ ပါရမီပါမှ လုပ်နိုင်တာ...(သူတို့ က ကိုယ့်ထက် ပါရမီပိုရှိ သလိုလိုနဲ့ ပေါ့နော်) ဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်နဲ့သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ယူမယ့်သူ မရှိလို့အပျိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားတာလေ (ယောင်္ကျား၊ မိန်းမ မရွေးပေါ့လေ)။
လိုရင်းကို သွားမယ်ဆိုရင်၊ မျက်နှာကို နုနယ်အောင်လုပ်ဖို့ ကြတော့ မိတ်ကပ်တို့ ၊ ပေါင်တာတို့ ၊ အမျိုးမျိုး ရှိနေတယ်လေ။ ယောင်္ကျား လေးတွေကလဲ မျက်နှာကို ကြည့် ပြီးရင် လက်ကို ကြည့်ကြတယ်လေ။ လက်က တွန့် နေရင်တော့ မျက်နှာ ဘယ်လောက်နုနု အဘွားကြီး ပဲ ဖြစ်မယ်ဆို ပြီးကောက်ချက်ချတတ်ပြန်တယ်ဗျ။
အဲ ဒီနေ့ တော့ ကြံကြံဖန်ဖန် ကျနော်လဲ စာအုပ်တစ်အောက်ကို ကောက်ဖတ်တုန်းရတာလေးကို ပြန်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
နည်းကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့စင်ကြယ်အောင်ဆေးပါလေ။ ပြီးသွားတဲ့ အခါ မှာ လက်ကို သကြား (စားတဲ့ သကြားပေါ့) နဲ့ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ တစ်နေ့ ကို နှစ်ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် လက်ရဲ့နုနယ် မှုကို ခံစား လာရပါလိမ့်မယ်။
သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုတော့ အပျို၊ လူပျို လေးတွေလဲ ညားနိုင်ကြပါစေဗျာ။
ရှမ်းကလေး (source: swan နှင့် ဖြည့်ဆည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ )
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:51 AM No comments:
Posted by Shankalay or Sai Sai at 12:30 AM No comments: